Apple iri kushanda pachirongwa cheSiri icho "chinotsvaira" makwikwi | IPhone nhau
Apple payakaunza Siri muna 2011 zvaive zvakanaka kwazvo. Sevashandisi, tinogona kutanga kukumbira iPhone yedu kuti iite zvimwe zvinhu, sekuronga nguva dzekugadzwa, maalarm kana kutsvaga internet, asi izvo hazvichakwanise muna 2016. Zvino ndiwo makwikwi ari kutora nhanho kumberi uye Siri Iri kuramba yakanamatira, asi chinofadza ndechekuti Apple iri kunyatsoziva izvi uye iri kugadzirira kuburitsa iyo hombe yekuvandudza iyo anogona ona mwenje wezuva mumavhiki asingasviki maviri paWWDC 2016.
Gore rakapera, Apple yakatenga kambani yeUK VocalIQ uye many source vanoti Tim Cook nekambani vakafunga kuti tekinoroji yavo ichave inonakidza zvekuti vaida kuitora kuti isazotangwa seyekushandisa smartphone kana imwe kambani yaive pamberi pavo. Izvo zvinyorwa zvakare zvinoratidza kuti Apple nyowani nyowani mubatsiri ichave yakasimba zvakanyanya uye inokwanisa kupfuura vese vabatsiri varipo nhasi saCortana kana Google Assistant.
Siri aigona kudzosera korona yake gore rino
Chimwe chezvinhu chinoita kuti iyo nyowani vhezheni yaSiri ive yepamusoro chaiyo mubatsiri ndeyekuti VocalIQ yakaedza chigadzirwa chayo uye chemakwikwi vachishandisa masikirwo emitauro yemitauro yakajairwa sekutaura kwevanhu. Mune manhamba, iyo VocalIQ chigadzirwa chakawana a 90% yekubudirira mwero wekunzwisisa izvo zvavaimubvunza mumibvunzo yakaita se «Nditsvagire yekudyira yemuno yeItari inopa Wi-Fi uye haina yekupaka«. Kune rimwe divi, makwikwi, senge yazvino vhezheni yeSiri, Google Mubatsiri, Alexa, naCortana, vaingogona chete kunzwisisa uye nekupa mhedzisiro mhedzisiro 20% yenguva.
Pandinonyora iyi data, zvinoita senge kwandiri kwakakosha kwakadaro kwehunhu zvekuti ndine kusahadzika kunonzwisisika kuti izvi zvichaona mwenje gore rino. Asi runyerekupe rwakawanda runoti Apple ichavhura a mutauri akangwara ino zhizha uye iyi vhezheni yaSiri ichave yakakosha yekutengesa poindi, saka chero chinhu chinogoneka. Ndinovimba runyerekupe nderwechokwadi uye tichaona vhezheni itsva yaSiri munaJune 13.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Apple iri kushanda pane vhezheni yeSiri iyo inogona "kutsvaira" makwikwi
Rafael pszos akadaro
Ndinoda kuti Siri isabatika ... (nekuti kana iwe ukapera data inoenda segehena .. ..) iyo ingave hoot uye kuti ine oyesiri sarudzo pamidziyo yakaita seiyo iPhone 6 uye iyo iPhone SE ... oyesiri isina yazvino, une sarudzo yekusarudza kuiisa kana kwete)
Izvo zvinhu zviviri zvichave hoot !!
Pindura kuna Rafael pszos
Zvizere unobvumirana naRafael. Kunyanya kana zvasvika pakuvandudza chinzvimbo chisina kukwana
Kana vakavhura vhezheni yepamhepo, inofanirwa kunge iri yakakosha, uye ichazodya yakawanda yekuchengetedza neye CPU zviwanikwa ... Hazvinyatsoita.
Iyo haifanirwe kudya zviwanikwa uye CPU, sezvo iri senge iri online asi isingabvumirwe vhezheni (kunze kwaizvozvo yaisazorema zvakanyanya sezvo tichigona kutaura zvishoma, kufonera vakadaro, ita izvi, seta alarm, imwe joke nezvimwewo), kana yairema megabyte zana mumhepo isingaenzaniswi ini handifunge kurasikirwa nemasimba iwayo zvachose.
Izvo zvakafanana nemushanduri weGoogle usingabvumirwe, iwe unotora runyorwa rwemutauro iwe rwaunoda uye ale, iwe uchitova, semuenzaniso, murume wako, Chirungu munzvimbo isingaite uye kuteedzera!
Izvo zvingave zvinotonhorera, kana Apple ikatanga nzira yekutanga isingaite, kushevedzera, kuseta alarm, mameseji, zviziviso, ini ndato gutsikana nazvo!
Apple inopomerwa mhosva yeWi-Fi patent neCalTech